Ny Hasina Andriamanjato: lasa Mpanenjika Makorelina. | mandimby maharo
Ny Hasina Andriamanjato: lasa Mpanenjika Makorelina.
Posted on 7 April 2014 by Mandimby Maharo
« Famerenana ny hasin’Antananarivo ». io no fototry ny asa rehetra tanterahin’ny Fivondronana Antananarivo Renivohitra tarihin’ny Filohan’ny Delegasiona manokana Ny Hasina Andramanjato. Loha-laharana amin’izany ny fanalana ny fako misavovona efa ho volana maro izay. Eo koa ny fandaminana ny fifamoivoizana. Ho jereny manokana koa ny fandaminana ny tsena sy ireo mpivarotra amoron-dalana, ka isan’ireny ny makorelina, na ny mpivarotena.
Avotra, 20 taona. 3 taona nanaovana makorelina. Tsy manana karatra izy saingy manaramaso ny fahasalamany eny amin’ny hopitaly matetika. Ny fahantran’ny ray amandreniny no nanosika azy hivarotena , ary ny tsy fahitany asa noho izy tsy ampy diplaoma no mbola hanaovany izany hatrizao. Mahazo 10000 Ar ka hatramin’ny 25000 Ar isaky ny alina ivoahany eny Analakely izy ka izay no entiny hamelomany ny zanany 4 taona. Tsy mahamenatra hoy izy ny asany satria sady mahazo vola izy no afaka manararaotra ny fahatanorany. Mandrapahita asa hafa aloha dia aleony miaraka mifoka, misotro ary manome fahafinaretana ireo mpilalao fitia.
Nanomboka ny Alakamisy 03 aprily teo ary dia noraran’ny kaominina ny fijorojoroan’ireto mpivarotra fahafinaretana ireto eny amin’ny faritr’i Tsaralalàna, Analakely,Antanimena, Antaninarenina sy 67Ha. Fampiharana ny andininy faha-334 amin’ny fehezan-dalàna famaizana tamin’ny taona 1999 izao atao izao raha ny voalaza ao anatin’ilay baiko midina. Ny tanjona voalohany noho izany dia ny hanalana ireo tsy ampy taona manao ity asa ity. Ankoatr’izay dia voalaza fa miteraka tabataba sy mahabe ny fako eny amin’ireo faritra ireo ny fisian’ireto mpijorojoro eny amoron-dalana ireto.Manginy fotsiny ny maha lasa toerana fieren’ny jiolahy sy ny mpanendaka aany amin’ireny elakela-trano sy hotely be makorelina ireny. Ka izay no antony manosika ny kaominina hanao izao fanenjehana izao.
Manoloana io fanenjehana io dia nanao fihetsiketseha fanoherana ireto tovovavy ny alina ireto. Tsy manaiky ny hanalana azy amin’ny asany izy ireo raha toa ka mbola tsy misy vahaolana maharitra atolotry ny fanjakana. “Tsy fidiny ho anay no manao izao asa izao fa noho ny tsy fisin’ny orinasa sy ny fikatonan’ny zones franches dia izao aloha no atao mba hamelomanay ny zanakay.” hoy izy ireo. Maro amin’ireo mpivarotena tokoa manko no manambady sy manan-janaka mianatra. “Afaka manampy ny fanjakana izahay amin’ny fanoroana ireo zaza tsy ampy taona mivarotena sy manome ny anaran’ireo jiolahy miriaria ety satria fantatray avokoa izy ireo” hoy ny sasany amin’izy ireo. “Mpifaninana tsy ara-dalana aminay sady manimba ny tsena manko ireo ka raha vonona ny fanjakana dia hanampy azy izahay; samy mahazo tombony amin’izay” hoy ihany izy ireo nanohy ny teniny.
Raha ny fanisana manko dia maherin’ny 20000 ireo tovovavy mivarotena eny amin’ireo toerana mafana eto andrenivohitra ireo. Ny 8000 amin’ireo ihany nefa no manana ny karatra fizaham-pahasalamana afahany manao ity asa ity “ara-dalana”. Io karatra nomen’ny fanjakana io tokoa manko no ahitana ny mombamomba ny makorelina iray: ny anarany feno, adiresy, ny taona ary indrindra ny tsy fintondrany ny otrikarenina SIDA sy ireo aretin’ny fitaovam-pananahana maro. “Aina no amidy ety! Ka raha manome asa hafa mendrika ho anay ny fanjakana dia hiala izahay!” hoy ireto tovovavy ireto namarana ny teniny.
Hatreto tokoa aloha izany dia io vahaolana vonjimaika io hatrany no hitan’ny fanjakana. Ilaina ny fanadiovana ny tanàna nefa maika koa ny fanomezan’asa ny mpandoto tanàna. Tsara koa ny mampihatra lalàna fa tokony hisy fepetra koa hafahan’ny olona manaraka ny lalàna.
Tags: Antananarivo, Crise, MADAGASCAR, makorelina, prostituée, sexe, Vih/Sida, volaCategories: Actralité, societé